पीसीआर प'रीक्षणको रि'पोर्ट ने'गे'टिभ आएकाहरुबाट घर जान पाउनु पर्ने भन्दै डाक्टरमाथी कु'टपी'ट ? - Filmy News Portal Of Nepal
पीसीआर प’रीक्षणको रि’पोर्ट ने’गे’टिभ आएकाहरुबाट घर जान पाउनु पर्ने भन्दै डाक्टरमाथी कु’टपी’ट ?
कोरोना संक्रमितहरुलाई राख्ने क्वारेन्टिनको उ’चित व्यवस्था नहुदा नागरिकले दु:ख पाउंन थालेका छन् । कतिपय क्वारेन्टिनको निर्माण स्थानिय तहले हेलचक्राई गरेकै कारण अ’प्रिय घ’टना बढ्न थालेका छनन् । यहीबीच पुनः रौतहटको राजपुर नगरपालिका-९ स्थित एक क्वारेन्टिन स्थलमा स्वास्थ्यकर्मी कु,टिएका छन् । राजपुरको बैरियास्थित ठूलो मदरसा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूको आ’क्र’मणबाट दुई जना स्वास्थ्यकर्मी घा’इते भएका छन् ।
घा’इते हुनेमा सिनियर अहेव खुर्सीद आलम र रामनरेश साह रहेका छन् । आ’क्रमणबाट आलमको टा’उको फु’टेको छ । उनकाे स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उ’पचार भइरहेकाे छ । पीसीआर परी’क्षणको रि’पोर्ट ने’गेटिभ आए पनि सं’क्रमतिसँगै केही दिन बसेकाले आरडीटी परीक्षण गराएरमात्रै घर पठाउने तयारी भइरहेको समयमा उनीहरूले त्यसको वि’रोध गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आ’क्रमण गरेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरले जानकारी दिए ।
‘क्वारेन्टाइनमा बसेका २०९ जनाको पीसीआर प’रीक्षण गर्दा ६४ जनाको रि’पोर्ट पो’जेटिभ आएको थियो । ने’गेटिभ रि’पोर्ट आएका व्यक्तिहरू पनि केही दिन सं’क्रमितसँगै बसेकाले आरडीटी प’रीक्षण गराएरमात्रै पठाउने तयारीअनुसार आरडीटी प’रीक्षण भइरहेको थियो ।’ ठाकुरले भने, ‘बुधबार २० जनाको आरडीटी परीक्षण भइसकेको थियो । जसमा १० जनाको आरडीटी रि’पोर्ट पो’जेटिभ पनि देखियो ।
आरडीटी प’रीक्षण चलिरहेकै समयमा ए’क्कासी उनीहरूले प’रीक्षण नै नगरी घर जान पाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि जा’इला’गे ।’ क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरू चढेर आएको तीनवटा मोटरसाइकल समेत तो’डफो’ड गरेको ठाकुरले बताए । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको आरडीटी प’रीक्षणका लागि जिल्लाबाट तीन जना स्वास्थ्यकर्मीसहित ९ जनाको टोली ख’टिएको थियो ।
यसअघि इशनाथको जोकहामा रहेको क्वारेन्टाइनमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई कु’टपि’ट भएको थियो । बैरिया क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका ५०९ जना बस्दै आएका थिए । ५०९ जनामध्ये पहिलो लटमा १८६ जनाको पीसीआर प’रीक्षण गरिएिको थियो । जसमा ३१ जनामा सं’क्रम’ण पु’ष्टि भएको थियो भने एक सय ५५ जनाको रि’पोर्ट ने’गेटिभ आएको थियो । त्यसबेला पनि नगरपालिकाले ने’गेटिभ आएका व्यक्तिहरूको आरडीटी प’रीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो । तस्बिर : अनलाईन खबर